Icho chikonzero nei ma hashtag ari akakurumbira zvakadaro nekuti ivo vanotendera yako positi kuti ionekwe nevazhinji vateereri vanogona kunge vasati vatove nehukama newe. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti zvakagadzirwa sevhisi, senzira yekupfupisa maitiro kana zvasvika pakutsvaga zvimwe zvakatumirwa nezve misoro yaunofarira.
On Tagboard, kurudziro ndeyekuongorora huwandu, manzwiro uye mamwe ma hashtag ane hukama munzvimbo zhinji dzezvenhau mapuratifomu. Chinangwa chako chinofanirwa kuve chekuziva chakanyanya kufarirwa icho chakanyanya kukoshesa kumusoro wenyaya rezvemagariro enhau kana chinyorwa chauri kureva.
Heino zano rangu… be nguva dzose! Fungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag iwe yaunonyora nezvayo pamwe nemamwe madhizaidhi enhau enhau. Zvino, chimbofungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag uye anowanzo kuwana zvitsva zvemukati uye zvinyorwa zvakagadzirwa newe. Ndeupi iwe waunofunga kuti unokupa iwe mukana uri nani wekuteverwa, kuvaka ruzivo, kubatana neakaundi, kana pakupedzisira kuita bhizinesi naye.
Fungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag iwe yaunonyora nezvayo pamwe nemamwe madhizaidhi enhau enhau. Zvino, chimbofungidzira mushandisi ari kutsvagisa hashtag uye anowanzo kuwana zvitsva zvemukati uye zvinyorwa zvakagadzirwa newe. Ndeupi iwe waunofunga kuti unokupa iwe mukana uri nani wekuteverwa, kuvaka ruzivo, kubatana neakaundi, kana pakupedzisira kuita bhizinesi naye.
Kutenda neruzivo, Douglas. Ndinoda kuwedzera ruzivo rwangu nekushandiswa kwe hashtag.
- Instagram. Vakaora mwoyo sevanhu vanoishandisa spam uye zvemukati zvisina kukodzera. Semuenzaniso #sea inondiratidza mifananidzo mina chete inoenderana negungwa uye zvimwe kune zvimwe zvinhu asi kwete gungwa.
- Twitter. Mamiriro ezvinhu ari nani, asi zvakadaro haana kunyatsonaka. Zvese zvandinoda kutaura ndezvekuti valusble zvinhu zvine akakodzera ma hashtag anonyanya kupa akarasika muruzha. Saka kukwezva kutarisisa kwairi unofanirwa kushandisa chimwe chinhu chimwe, senge mufananidzo mukuru kana kutaura vanhu mune tsananguro
Zvita 21, 2015 na12: 55 PM
Pfungwa huru, Alex. Zvinosemesa zvachose pavanoshungurudzwa. Zvichida ivo vanowedzera iyo yekuburitsa system mune ramangwana apo hashtag spammers inogona kubatwa uye maakaundi avo kubviswa.